Indlu yesikolo esiDala ibekwe eGlen of Aherlow
Glen of Aherlow, County Tipperary, Ireland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoanne
Indlu yesikolo eyimbali eguqulelwe kakuhle ebekwe kwiglen emangalisayo eneembono zentaba. Indawo yokuhlala ebanzi eyilwe ngokuyilwa ngaphezulu kwemigangatho emibini enesilingi eziphakamileyo, iindonga zesanti eziveziweyo kunye nomgangatho wamaplanga. Amagumbi amabini okulala anomtsalane kunye nesitayile. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elisanda kuhlaziywa. Ulwandiso lwangoku longezwe ngasemva kwipropati ethi ngamanye amaxesha isetyenziswe ngumamkeli. I-Schoolhouse yipropathi eyahlulwe ngokupheleleyo.
Yakhiwa ngo-1910 kwaye isebenza njengesikolo sesizwe ukusuka ngo-1911 ukuya kutsho ngo-1971. IGlen yase-Aherlow isembindini we-County Tipperarys ubuhle bendalo kunye neendlela ezininzi eziphawulwe kakuhle kunye nokuhamba okumangalisayo kwi-Galtees, yonke into ngaphakathi kwemizuzu ye-Schoolhouse. I-Schoolhouse yindlu ezimeleyo ezimeleyo.
Indawo yokubasa umlilo ngaphakathi endlini: esebenzisa iinkuni
Bonisa zonke 49 izinto onokuzisebenzisa
4.90 ·Izimvo eziyi-60
4.90 out of 5 stars from 60 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-60
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi60
I-Old Schoolhouse ibekwe entliziyweni yendawo ebukekayo kunye neGlen yase-Aherlow yakudala, phakathi kweendawo ezinembali ezibandakanya iintaba zeGaltee ezikhuthaze ubutyebi bamabali aseIreland, iingoma kunye nobugcisa.
Ifanelekile ukuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile, uya kufumana iindlela ezininzi eziphawulwe kakuhle kwiinduli zeSlievenamuck. Okona kunomdla ngakumbi, ukunyuka iintaba ezidumileyo zeGaltee kunye namachibi ngamava omlingo. Iintaba zeKnockmealdown kunye neComeragh nazo zikufuphi.
Kwiindawo zembali zonakalisiwe ukuba uzikhethele. ILiwa elidumileyo lehlabathi leCashel, iCahir Castle, iSwiss Cottage kunye neHolycross Abbey zifikeleleka lula. Kanye nezo, uya kufumana amatye anqabileyo angaziwa kangako njengoko uphonononga le ndawo intle.
Umbuki zindwendwe ngu- Joanne
Iyafumaneka kwimibuzo nokuba ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile. Ukudibana kunye nokubulisa ekufikeni (ukuba kufunwa ziindwendwe).